Calanii Nebiga (SCW) | Maqaallo | somaanta
Muran badan ayaa ka dhashay calanka madow ee ururada islaamiga ahi ay ka taagaan goobaha ay joogaan. Dad badan ayaa ka qarracma marka ay arkaan calankaas oo babanaya. Laakiin qaar kale ayaa ku farxa oo ilaahay weyneeya, ayaga oo leh ”Allaahu akbar”. Qaar ayaa dejiya haddii ay awood u yeeshaan. Qaar kale ayaa dhaleeceeya oo cay iyo dacaayad isugu dara. Waxa aan dhawaan daawaday khudbad uu jeedinayo Cabdiraxmaan Janaqow oo ay ku jirto faallo ku saabsan calanka madow iyo calanka Soomaaliya ee buluugga ah (fiirso: http://www.youtube.com/watch?v=WMnk3ygCYfs ). Janaqow waxa uu calanka madow ku tilmaamayaa:
• Mid aan la garanayn cidda leh.
• Mid fool xumo badan
• Calan ay isticmaasho Alqaacido
Dhinaca kale waxa uu amaanay calanka buluugga ah ee Soomaaliya, isaga oo ku boorriyey dadka in la ixtiraamo oo aayaheenna lagu ilaaliyo. Dabadeedna waxa uu ku heesay heestii calanka ee “qolaba calankeedu waa cayn”. Dadku waa ay istaageen oo heestii ayey la qaadeen. Heestuna waxa ay ku dhammaatay ereyga “caashaqa” oo ah dhiirrigelin in si xad-dhaaf ah loo jeclaado calanka buluugga ah. Xukunka ay ka qabto shareecada islaamku in la isu taago calanka iwm waxa aan u daynayaa culimada. Kollay anigu waxa aan ku qanacsanahay in ay tahay xaaraan iyo dembi in calan weynayntii la isu taago maadama la diiday in isu taago xiitaa dadka bina aadanka ah ee Alle karaameeyey . Sidoo kale xukunka ay leedahay in dadka lagu boorriyo jacaylka wax Alle ka sokeeya ama Alle dartii wixii aan ahayn, iyadana culimada ayaan u daynayaa ee bal dib ha loo baadho. Haseyeeshee waxa aan u banbaxayaa calankan madow iyo xagga uu ka soo jeedo.
” لا إله إلا الله مُحمد رسول الله” Sidaas ayaa meelo kalena loogu xusay in calanka dagaalka ee Nebigu ahaa mid madow, calanka goobtuna ahaa mid cad, dhexdana ay kaga qornayd kelmadda tawxiidku.
 Kooxdii ama dawladdii calankeeda ka dhigata sida kii Nebiga oo kale iyaga oo uga jeeda ku dayashada Nebiga (scw) iyo jacaylkiisa, waxa ay sameeyeen sunne khayr ah oo xasanaadleh.
 Kooxdii ama dawladdii la dagaallanta dhaqan sugnaaday oo rasuulku (scw) lahaa , iyaga oo ogsoon balse ka san-taagaya oo necbaanaya, kuwaas xaalkoodu waa “Alle ha u sahlo”
 Kooxdii ama dawladdii calan ka dhigata mid aan ahayn kii Nebiga (scw), iyaga oo aan la dagaallansanayn dhaqankii Nebiga (scw), kuma dambaabayaan calankoodaas.